USB-C HUB - Dongguan Huachuang Eletrọniki Co., Ltd.
AJ .J. AJ .J. AH.
Ee, anyị chọrọ iwu mba niile ka nwee ọnụọgụ iwu pere mpe na-aga n'ihu. Ọ bụrụ na ị na-achọ ị resell ma ọ dịkarịsịrị ntakịrị, anyị na-akwado ka ị lelee weebụsaịtị anyị
Maka nlele, oge ndu bụ ihe dịka ụbọchị asaa. Maka usoro mmepụta, oge izizi bụ ụbọchị 20-30 ka ị nwetasịrị nkwụnye ego. Oge mbu ga-adị mma ma (1) anyị enwetara nkwụnye ego gị, yana (2) anyị nwere nkwenye ikpeazụ gị maka ngwaahịa gị. Ọ bụrụ na oge ndị ọrụ anyị anaghị arụ ọrụ na usoro iheomume gị, biko jiri ire gị na-ere ihe ị chọrọ. N'okwu niile anyị ga-anwa ịnabata mkpa gị. N'ọnọdụ ka ukwuu, anyị na-enwe ike ime ya.
Ee, anyị na-eji nkwakọ ngwaahịa mbupụ dị elu mgbe niile. Anyị na-ejikwa mbukota ihe egwu pụrụ iche maka ngwongwo ndị dị ize ndụ na ndị na-ebu mmiri nchekwa oyi na-agbanwe maka ihe ndị nwere oke mmetụta. Nkwakọ ngwaahịa ọkachamara na igwe anaghị eburu ọkọlọtọ nwere ike ibute ụgwọ ọzọ.
Ọnụahịa mbufe na-adabere n'ụdị ị họọrọ iji nweta ngwongwo. Express na-abụkarị ndị kacha ọsọ ọsọ mana ọ kachasị ọnụ ụzọ. Site na mmiri nke oke osimiri bu uzo kacha mma maka oke. Gharịrị ọnụ ahịa enwere ike inye gị naanị ma ọ bụrụ na anyị maara nkọwa nke ọnụọgụ, ịdị arọ na ụzọ. Biko kpọtụrụ anyị maka ozi ndị ọzọ.